Xuutiyiinta Oo Digniin U Diray Iiraan! | Xaqiiqonews
Xuutiyiinta Oo Digniin U Diray Iiraan!
Hogaamiyaha kooxda “ansaarulaah” ee ka dagaalama Yemen, Maxamed Cali Al-Xuuti ayaa digniin u diray Iiraan ka hor inta aysan galin Heshiis ku saabsan barnaamijka Nukliyeerka.
Xuuti oo ah bartiisa Tuwiterka qoraal soo dhigaya ayaa yiri “Iiraan hadii ay aqbasho in ay joojiso bacriminta iyada oo heshiis la gaarin, waxa ay noqon doontaa khalad kale oo la mid ah heshiiskii ay horay u gashay kaasi oo burburay damaanad la’aan , marka dambana wadahalka waxaa lagu soo dari doona barnaamijka gantaalaha”.
Waxa uu ku sii daray “Marka horana heshiis hadaa maqasho waa “fulin”, heshiisku ma ahan wadahadal iyo saxiix sida ay had iyo jeer sameeyaan Mareykanka iyo saaxibadiis, waadna aragtaan halkii uu ku dambeeyey heshiiskii Stockholm”.
Dowladda Washington ayaa horay uga baxday heshiiskii “Nukliyeerka” xilligii madaxtinimada Trump, halka Biden uu isna diiday in uu dib ugu soo laabta heshiiska hadii aysan Iiraan fulinin qodobadii lagu heshiiyey, balse Iiraan waa ay diidan tahay waxa ayna ku doodeysaa in heshiis cusub la galo iyada oo aan wax shuruud ah lagu xirin.